» हामी बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउँछौं : अनिल अग्रवाल
४ कार्तिक २०७८, बिहीबार १४:२०
बाबु इश्वरचन्द्र अग्रवाल र आमा रमेदेवी अग्रवालका सन्तानका रुपमा हेटौंडामा जन्मिएका अनिल अग्रवालले आसन्न मकवानपुर उद्योग वाणीज्य संघको चुनावमा वाणीज्यतर्फ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनी अध्यक्षको उम्मेद्वार कृष्णकुमार गुप्ता अग्रवाल प्यानलबाट चुनावमा होमिएका छन् । उनी कपडा व्यवसायमा आबद्द छन् । हजुरबुबाले ७५-८० वर्षअघिदेखि सन्चालन गरिरहनुभएको कपडा व्यवसायलाई उनले निरन्तरता दिइरहेका छन् । सुरुवाती व्यवसाय, जसबाट व्यवसायिक पहिचान समेत उनको बनेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । तीन पुस्तादेखि चल्दै आएको व्यवसायका कारण आजका दिनमा आफ्नो परिचय व्यवसायी बनेकाले यो पेशालाई उनी औधी प्रेम गर्छु भन्छन् । संघको यही कात्तिक ७ देखि ९ गतेसम्म हुने चुनावमा आगामी कार्यकालका लागि वाणीज्यतर्फको उम्मेद्वारीका विषयमा उनीसंग लोकखबर डटकमका संवाददाता रन्धिर शाहले कुराकानी गरेका छन् ।
मउवासंघको चुनावमा तपाईंको उम्मेद्वारीका विषयमा जानकारी गराउँनुहोस् न ।
आसन्न मउवासंघमा वाणीज्यतर्फ उपाध्यक्षमा मेरो उमेदवारी रहेको छ । मउवासंघमा मैले पाँच वर्ष कार्यकाल बिताएको छु । यो मेरो छैठौं कार्यकालको वाणीज्यतर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी हो । मेरो पहिलो वर्षको कार्यकाल आमन्त्रित सदस्यको ?पमा भित्रिएको थियो । पूर्ण निर्वाचन सदस्य पदमा निर्वाचन भएर सदस्य पदमा रहेर नै काम गरे । त्यो समय सदस्यता अभिवृद्दि संयोजक भए । यो पदमा रही रहँदा मनहरी क्षेत्रमा पश्चिम क्षेत्र समिति संचालित गरेको थियो । भुवनलाल श्रेष्ठको पालामा पूर्व सदस्य पदमा विजय भएर सह कोषाध्यक्षको ?पमा काम गर्ने मौका पाए । त्यसपछि राजकुमार न्यौपानेको पालामा पूर्व वाणिज्य तर्फको सदस्य भइरहँदा त्यस वर्ष सदस्य पदमा रही पूर्ण ?पमा मउवासंघमा आफ्नो अनुभवह? बटुल्ने मोका पाए । पाँचौं कार्यकालमा वर्तमान कोषाध्यक्ष चयन भएको थियो । पाँचौं कार्यकालमा सदस्य पदमा विजय भएर कोषाध्यक्ष पदमा आएको थिए ।
पहिला सहकोषाध्यक्ष पदमा हुँदा यहाँले व्यवसायीका लागि केके गर्नु भयो ?
उद्योग वाणीज्य संघमा मैले १३ वर्षको अनुभव हासिल गरिरहँदा व्यवसायीहरुलाई सबैभन्दा बढी समस्या भनेको वाणीज्य तर्फको व्यवसायीलाइ छ भन्ने लाग्छ । वाणीज्यतर्फ विशेष गरी कर, मिक्स मास, अनुगमन र नाप तौल लगायत धेरै समस्यालाई हामीले सहजीकरण गर्दै आएको छौं । हिजोको दिनमा प्यानमा व्यवसाय गर्ने तथा त्यो भन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य भ्याट दिनुपर्ने थियो । एक करोड ?पैयाँ सम्मको कारोबार गर्दा भ्याट नलाग्ने तथा प्यानमा हुने गर्छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा नापतौलको लाइसेन्स लिने व्यवस्था छैन । लाइसेन्स लिनका लागि अझैसम्म हामीले प्रदेश २ मा जानुपर्छ । यसलाइ मकवानपुरमा ल्याउने प्रयास हाम्रो जारी रहेको छ । व्यवसायीहरु अहिले बैंक ब्याजको त्रासमा रहेका छन् । मउवासंघ र महासंघ बिचको सहकार्यमा रास्ट्रबैंक संग छलफल गरी अहिले ब्याजदरमा घटाएको छौ।
यहाँले किसानहरुको लागि बजारीकरणमा के कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ ?
हाम्रो महासंघमा एउटा कृषि उद्यमी समिती रहेको छ । त्यो समितिमा मउवासंघका पूर्व अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गी रहनुभएको छ । सुमार्गी कृषि उद्यमका सभापति रहनुभएको छ । उहाँले ७७ जिल्लामा कृषि उद्यमबारे विभिन्न किसिमका तालिमहरु तथा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउनुभएको छ । हाम्रो मउवासंघमा पनि एउटा कृषि समिती रहेको छ । यसले समय समयमा कृषिहरुको बीचमा बजारीकरण गर्ने तथा नेपाल मै उत्पादन भएको खाद्यान्न सामग्री नेपालभरी कसरी लैजाने विदेशी सामाग्री भन्दा हाम्रै देशमा बढी सामाग्री कसरी उत्पादन गर्ने बारे हाम्रो छलफल हुँदैछ ।
तपाईं संघको चुनावबाट विजय भएपछि के गर्ने योजना बनाउँनुभएको छ ?
हामीले व्यवसायीहरुलाइ हुँदै आएको समस्या तथा बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएका छौं । हामो २१ कोठाको भवन छ तर ठूलो पानी परेपछि व्यवसायीहरुको सामान भिज्ने गर्दछ । त्यसलाइ निराकरण गर्नेछौँ । हामिले कर करले हैन रहरले बुझाउनु पर्छ विषयमा भन्नेमा प्रोत्साहित गर्नेछु । हाम्रो टिमलाई तपाई सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा छ । हाम्रो प्यानल नै हामी विजय भए्पश्चात् बोलेर हैन गरेर देखाउने छौ । हाम्रो यो योजना र उम्मेद्बारी तपाइ व्यवसायीको हकहितका लागि हो । जय व्यवसायी ।
‘चाडपर्वका बेलामा पालिकाका कोही पनि भोकै हुनुपर्दैन ।’